Childhood-Biography- Izvo zvinhu zvatiri ndezvevaFans
Wese munhu ane Nyaya yeUcheche. Isu tiri vepaDikiBiography uye tinokubatsira iwe kutaurira iyo nyaya. Kudzvinyirira Lannister (Peter Dinklage) mune huru yekupedzisira yeHBO yakarova nhevedzano "Game of Thrones" yakagadzira yakasimba kesi yenyaya iyo chero munhu anogona kuenderana nazvo. Akabvunza kuti:
“Chii chinobatanidza vanhu? Mauto? Ndarama? Mireza? (kumbomira kwenguva refu)… .Zvinyorwa!. Hapana chimwe chinhu chine simba pasi pano kupfuura nyaya yakanaka. Hapana chinogona kuimisa, Hapana muvengi anogona kuikunda… ”
Mufananidzo wehudiki waPeter Dinklage nguva refu asati ave Tyrion mune yakateedzana nhevedzano "Game of Thrones". Chikwereti: Gawker.
Childhoodbiography (CB), inobvumirana neTyrion's soliloquy nekuti inotaurisa maficha enyaya / nhoroondo. KuCB, tinonzwisisa kuti munhu wese ane nyaya yehucheche. Nekudaro, isu tinovavarira kuve ivo-vanomira vechokwadi muchengeti wenyaya dzakadai. Kuti zvibudirire izvi, CB inoshandisa nzira yekutsvagisa yakakura mukubatanidza mabikirwo ezviitiko zvinozivikanwa kubva pakuberekwa kwemunhu kusvika pari zvino zvine hukama kuhudiki hwavo kana hupenyu hwepakutanga.
Mune mamwe mazwi, nhoroondo dzedu dzinotanga nenyaya dzehucheche dzichiri kubata, dzinoshamisira uye dzinonakidza misoro / chokwadi chinozadzisa zviitiko zveupenyu hwepakutanga chero chinyorwa chakanyorwa nezvacho.
Yemwana Biography inopa nhoroondo yakazara yeinozivikanwa zviitiko kubva panguva yekutanga nguva yeudiki kusvika zuva. Credits: CB.
Ndokumbira kuti uwane pasi apa misoro iri mune yedu nhoroondo kuitira kuti unzwisise zviri nani uye kukoshesa yedu yakasarudzika nzira yekunyora biografia.
Kutanga ne: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri Yemashure zvakazara zviripo zvichitenderedza hupenyu hwepakutanga uye nhoroondo yemhuri sezvavanopa ruzivo mukutanga kwekuzvininipisa kwepashure sezvakaitika kuBritish Fomula 1 mujaho mutyairi, Lewis Hamilton wakatanga basa rake rekurarama nekufamba nemumhanzi wetsiva nemotokari yakadzorwa neredhiyo panguva yehudiki hwake.
Lewis Hamilton akatanga nemotokari dzekutamba. Chikwereti: CB.
Musoro uyu unopawo ruzivo rwekuti kumashure kwemhuri kunozivisa sei zvisarudzo zvehupenyu uye sarudzo dzebasa. Iwo maratidziro enhoroondo yemhuri anotangira pane yakawedzerwa uye nekukurumidza zvinofarirwa nemhuri, kirasi yehupfumi hwemhuri uye zvinokanganisa senge mune nyaya yemuimbi weBarbadian Rihanna uyo akatendeuka kuva kuimba sekutiza kubva kumatambudziko emhuri yevabereki vake.
Inotevera ndeiyi: Dzidzo neKubata Buildup
Dzidzo neBasa Kuvaka-kumusoro kunouya nekukurumidza mushure meKutanga Hupenyu uye Mhuri kumashure. Pasi pemusoro wenyaya uyu, ruzivo nezve nhoroondo yedzidzo inopihwa kubva pamazuva ake ehudiki apo zviitiko zvine chinangwa zvakatungamira kusarudzo dzebasa zvinoonekwa.
Mhosva yakanaka semuenzaniso ndeyeAmerican rapper Kucho aida kufunda duramazwi semudzidzi wepamusoro. Nekudaro, akawana simba remashoko uye rwiyo rwavo rune mutsindo waakaisa mu riking uye haana kumbofunga nezve imwe nzira yebasa.
Eminem akatanga kukwiza muchikoro chepamusoro senge 14-gore. Chikwereti: Youtube.
Kuenderera ku: Basa Rokutanga Upenyu
MuHupenyu Hwekutanga Hwehupenyu, isu tinopa yakazara nzwisiso yezvakanyanya kukosha matangi ekutanga kana makore ekutanga enzira yakasarudzwa yebasa. Nekudaro, zviitiko zvinoitika umo hunhu hwehukama hwepamoyo uye hupenyu hwepamoyo hwepakutanga husingashandure kumabasa ekuzivikanwa ayo anozivikanwa mukuita mukufamba kwenguva.
Vashoma vateveri ndivo vanoziva izvozvo Will Smith (American actor) hupenyu hwepakutanga hwehupenyu hunyora zvinyorwa zvake semupengo. Nekukurumidza kumberi kusvika nhasi, ari anonyanya kuzivikanwa nezvekuita kwake semutambi neHollywood.
Will Smith aimboita rapper. Muchokwadi, iyo Grammy-yekuhwina rapper. Chikwereti: TrackRecord.
Under: Nzira yekuenda Mukurumbira Nyaya,
Pano, isu tinonyora zvinonetsa izvo chimiro chakakunda vasati vawana mukurumbira. Ichizivikanwazve sekushandurwa kuenda stardom, Mugwagwa Wemukurumbira Nhau zvinoenderana nehupenyu hupenyu nekutambudzika uye kusimbisa iwo maxims ayo ekutaura kwekuenda mushure mezuva rima.
Phil Mickelson inyanzvi yekuAmerican gorofu iyo yakatanga kutamba gorufu achiri mudiki asi yaitaridzika kunge yaisazombohwina zita rakakura mune rake gorufu basa. Kunyangwe akahwina akawanda marwendo ePGA, kutadza kwake kutora chikuru kwakamuona akanzi "mutambi akanakisa kusambofa akahwina mikuru" nepepanhau. Ivo havana kuziva kuti Mickelson aive panguva yekushanduka kuita stardom!.
Phil Mickelson akatadza kukunda zita rakakura mumakore gumi apfuura. Chikwereti: DailyMail.
Pamusoro peiyo: Kumuka Mukurumbira Nhau
Ichizivikanwazve seiyi nyaya yekubudirira, pano tinopa ruzivo rwezvakakosha kuita kana chirevo chezvaakabatsira nhaurwa yekuzadzisa zviroto zvake zvehucheche uye akavasundira kubva kunzvimbo yekutsvagirwa hukama.
Arguingly, hapana chimiro chiri chimiro chakakwana cheRise To Fame musoro wenyaya seMexico-American boxer, Andy Ruiz Junior. Asati akunda nhoroondo yekukunda kwake Anthony Joshua, Ruiz aive kure nezita remhuri. Kunyangwe mushure mekuwana mukana wekutarisana naAnthony Joshua, wekuMexico haana kutaurwa nezvake nekuti zvipingaidzo zvaifarira "Kukunda kwaJoshua". Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Andy Ruiz Jr akave zita remumba mushure mekukunda Anthony Joshua. Chikwereti: WorldBoxingNews.
Zvinokosha zvakaenzana: Relationship Life Facts
Kutsika kubva pahupenyu hwakazara hwepakutanga kuenda mukubudirira nyaya, isu tinopinda muUhukama Hupenyu Chokwadi uko ruzivo rune hukama hwepamoyo mudiki, nhoroondo yekufambidzana, vadyidzani vehupenyu uye zvibereko zvinopihwa.
Chinotonyanya kufadza ndechekuti musoro uno unobata dambudziko mune hukama nguva sezvinoonekwa mumutambo weDanish tennis player, Caroline Wozniacki ane ex-fiance uye weIrland gorofu mutambi, Rory McIlroy akadana mukadzi wake waakange arangana naye mumazuva mashoma kusvika kuchiitiko ichi.
Caroline naMcIlroy vaive pedyo nekuroora vasati vaenda kunzira dzakasiyana. Chikwereti: Independent.ie.
Kuongorora: Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Hupenyu Hwemhuri Hwechokwadi hunoshandira chinangwa chekupa ruzivo rwakawandisa nezvefamily yemhuri nhengo nekupa tsananguro yakadzama yezviitiko zvinozivikanwa / marwadzo muhupenyu hwavo. Iyo zvakare inoratidza hukama huripo pakati peiyo nhoroondo uye nhengo dzemhuri yake.
Hukama hunogona kuita nemoyo wese sezvakaitika kune mutambi weAmerican Tennis, Sloane Stephens baba vake vakamusiya achiri mucheche. Zvinokwana kucherechedza kuti, anga asipo kune chikamu chiri nani chebeche rake. Zvisinei, vakabatana paakanga achiri kuyaruka uye vaine hukama hwepedyo nababa nemwanasikana sevasina kumbobvira vaparadzaniswa vasati vafa.
Sloane Stephen nababa vake John vane imwe yedzakanakisa mhuri kupatsanura-kubatana nyaya. Chikwereti: SportsonEarth.
Kuti ikubatsire kuwana yakakwana mufananidzo ndeiyi: Personal Life Facts
Pasi Pemunhu Hupenyu Hwechokwadi, isu tinopinda mune akaomesesa kuomarara chikamu chehupenyu hwehupenyu. Pano tinotaura nezvezvinhu zvekuzvivaraidza nazvo, zvaunofarira uye nehupenyu hwemukati hwehuwandu hwekuti vateveri / vanoyemura kana vateereri vedu vangangodaro vasingazive nezvazvo.
Semuenzaniso, weRussia wezvematongerwo enyika, Vladimir Putin akakurira semwana wega wevabereki vanodzivirira ainzwa kuti aive nemikana yakakura yekuvapfuura kana akavharirwa mukati me "madziro mana ekuchengetedza". Nekuda kweizvozvo, akavandudza maitiro akasurukirwa ayo airatidzwa mukusarudza kwake mitambo yehudiki Judo (Asiri-timu mutambo) uye kugona kwakanyanya kwemauto / ezvematongerwo enyika mabasa aingoda kubatana kushoma kana kusaita.
Pamusoro pekunze kwake kwakadzikama, Vladimir Putin anoshupika asi anoshanda. Chikwereti: RockCafe.
Yechipiri kune yekupedzisira ndeiyi: Lifestyle Facts
Usaite zvikanganiso, zvirimo pasi pemisoro yeiyo Lifestyle Chokwadi zvine zvinongedzo kune yeiyo nhoroondo yehucheche nyaya / zvido. Kunyangwe ivo vachiwanzoita sevanodzinga tarisiro nekukurukura nezvehuwandu hwepeti, imba, mota uye mapatheni emashandisiro, zvinogona kukufadza iwe kuti uzive kuti zvese zvakabatana nezvido zvehucheche.
Evan Spiegel ndeye bhirionea wekuAmerican uyo anounganidza muunganidzwa wemotokari dzinodhura zvinoratidza chiratidzo chake chehuduku. Paaive achiri kuyaruka, Evan aida kuve zvake uye achityaira BMW asi akarambidzwa zvekuchengetwa zvakadaro nababa vake vakapfuma. Nekudaro, amai vake vakamubhadharisa iyo yaive iyo $ 75,000 mota. Naizvozvo, hazvishamise kuti bhirionari izvozvi anozvipinza nemota chero inodhura yaanoda kuti ive yake.
Kuravira kwaEvan Spiegel mumotokari dzekunze kwakadzokera kumazuva ake ehudiki. Chikwereti: CB.
Kuputira hachisi chokwadi chisina kujeka: Untold Facts
Kunyangwe zvisingazivikanwe chokwadi zvinouya kumuswe muswe, zvirokwazvo hazvisi izvo zvidiki sezvo zvichipa ruzivo nezve chitendero chemufananidzo, makakatanwa echokwadi, nyora nyowani uye nezvimwe zvakawanda izvo zvisingakwanise kuiswa mukati memisoro yambotaurwa nekuda kwekunakirwa.
Unoziva here kuti American Bilionea Warren retafura yaimbove inotyisa pakutaura paruzhinji? iye akazove akagona zvakanyanya pazviri mushure mekutora kosi yeDale Carnegie yekuti ungataura sei pane ruzhinji. Ndicho chisingazivikanwe kana chidiki chinozivikanwa nezve Warren Buffet.
Warren Buffett ane chikwereti chake kutaura pachena paruzhinji kuDale Carnegie kosi yaakatora makore mazhinji back. Chikwereti: RolexMagazine.
Muchidimbu, tine: Video Summary
Kutanga kubva kukota yekutanga yegore 2019, CB yakazviita iyo basa rekupa vateereri vake vanoda mavhidhiyo, pfupiso yakazara yezvese nhoroondo yatinonyora nezvayo. Ndokumbira Shanya uye NZIRAI kwatiri Youtube Channel yemavhidhiyo.
Ndapota ita zvakanaka kuti urambe uchishanya ChildhoodBiography sezvo isu tichiedza kupa zvikonzero izvo zvinokusundidzira iwe kuti uzvidavire kuti CB ine nyaya yakanakisa nezvevanhu vane mukurumbira kubva paudiki hwavo nguva kusvika zvino.